Park Ho-san – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Night in Paradise (2020) Unicode အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကိုးရီးယားကားကတော့ action drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းသားတွေကလဲ ကိုရီးယားဝူခုန်းကားထဲက Cha Seung-Won (Cheer Up, Mr. Lee, Believer) / Um Tae-Goo ( My Punch-Drunk Boxer,The Great Battle etc) / Park Ho-San ( The Call, Beautiful Voice) တို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး Jeon Yeo-Bin (Vincenzo) က မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။လူမိုက်ဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထယ်ဂူရဲ့အစ်မနဲ့တူမလေး ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုမှာ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် ဘို့ဆွန်းဂိုဏ်းကသတ်ခဲ့တာလို့ သူ့ရဲ့သူဌေးကပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဂိုဏ်းဥက္ကဠကို သူလက်စားချေဖို့လုပ်ကြံခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက် သူဌေးက သူ့ကိုပုန်းနေဖို့ ဂျယ်ဂျူဒိုကျွန်းကိုတစ်ပတ် လွှတ်လိုက်ပြီး အဲ့ဒီမှာ တစ်လလောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်တော့မယ့်ရောဂါသည်လေး ဂျယ်ယွန်းနဲ့သူတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘို့ဆွန်းဂိုဏ်းကလည်း သူ့ကိုပြန်လက်စားချေဖို့အတွက် လိုက်လာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ ဂျယ်ယွန်းနဲ့သူနဲ့ကြားကဆက်ဆံရေးကရောဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာ ကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ WinSu LeiMyat ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အခုတင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ကိုးရီးယားကားကေတာ့ action drama အမ်ိဳးအစားဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ မင္းသားေတြကလဲ ...
The Call (2020) Unicode Park Shin-hye ရဲ့ဒီနှစ်ထဲထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Alive ကော The Call ကော admin တို့က recommand ပေးချင်ပါတယ်။ Zoombie ဇာတ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက် Alive (2020)။ The Call (2020) ကတော့သည်းထိတ်ရင်ဖိုကားကြိုက်သူတွေအတွက်။ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့ 2019 မှာနေထိုင်တဲ့ Soe-yeon (Park Shin-hye) နဲ့ 1999 မှာနေထိုင်တဲ့ Young-sook (Jeon Jong-seo) တို့ကဖုန်း call တစ်ခုကနေဆက်သွယ်မိပြီးကံကြမ္မာ ပြောင်းဖို့လုပ်ရာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့. . . . . Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Ku$hKura ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Park Shin-hye ရဲ႕ဒီႏွစ္ထဲထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Alive ေကာ The Call ေကာ admin တို႔က recommand ေပးခ်င္ပါတယ္။ Zoombie ဇာတ္ကားႀကိဳက္သူေတြအတြက္ Alive (2020)။ The ...